ဒီနှစ် Ballon d'Or ဆုအတွက် ပိုင်ရှင်သစ် ထွက်ပေါ်လာမလား
ဒီနှစ် Ballon d’Or ဆုအတွက် ပိုင်ရှင်သစ် ထွက်ပေါ်လာမလား
3 Jul 2018 . 2:46 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၀)စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း စီရော်နယ်လ်ဒို C Ronaldo ၊ မက်ဆီ Messi တို့သာ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ Ballon d’Or ဆုက ဒီနှစ်မှာ သူတို့နှစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ ပိုင်ရှင်သစ်ထွက်ပေါ်လာမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်အတွင်း Ballon d’Or ဆုကို သူတစ်ပြန် ကိုယ်တစ်ပြန်ရယူခဲ့ပြီး တစ်ဦးကို (၅)ကြိမ်စီ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ အာဂျင်တီးနား၊ ပေါ်တူဂီတို့ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကပဲ စောစောစီးစီး ထွက်ခဲ့ရတာကြောင့် ၂၀၁၈ Ballon d’Or ပိုင်ရှင်အပြောင်းအလဲဖြစ်မလာဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက စောင့်ကြနေကြတာပါ။ ဒီနှစ်အတွက် Ballon d’Or ဆုကို မက်ဆီနဲ့စီရော်နယ်လ်ဒိုမဟုတ်ဘဲ ဘယ်ကစားသမားက ဆွတ်ခူးနိုင်မလဲ၊ ဆုရဖို့ အလားအလာအကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . . .
Ballon d’Or ဆုရဖို့ အလားအလာကောင်းတဲ့ ကစားသမားစာရင်းမှာ နေမာ ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေတာက သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ မက်ဆီ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို ခေတ်လွန်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့ ‘တစ်’ပေးခံထားရတဲ့ နေမာအတွက်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားတဲ့ ဒီလိုဆုမျိုးပိုင်ဆိုင်ဖို့ ထိုက်တန်တယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဘရာဇီးလ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြနေပြီး (၂)ဂိုးသွင်းယူထားသလို ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ထားတယ်။ အခုနွေရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းကို ရောက်ဖို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ နေမာအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် Ballon d’Or ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
အသက်(၁၉)နှစ်သာရှိသေးပေမယ့်လည်း World Class ခြေစွမ်းမျိုးပြသနေတဲ့ ဘာပေကလည်း Ballon d’Or ဆုကို ဆွတ်ခူးဖို့ ထိုက်တန်တဲ့အရည်အသွေးရှိသူပါ။ ပီရူးကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား အုပ်စုပွဲမှာ အနိုင်ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူ၊ အာဂျင်တီးနားနဲ့ပွဲတုန်းက (၂)ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ပီလီ Pele (၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလား)နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားတစ်ပွဲတည်း(၂)ဂိုးသွင်းခဲ့သူ စတဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ တကယ်လို့ အခုကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပုံစံကောင်းတွေ ဆက်ပြနေမယ်ဆိုရင် Ballon d’Or ဆုကို အသက်အငယ်ဆုံးဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာပါ။
ဟာရီကိန်း Harry Kane
Goal Machine ဟာရီကိန်းရဲ့ သွင်းဂိုးတွေက ရပ်တန့်လို့ မရနိုင်လောက်အောင်ပဲ။ စပါးအသင်းနဲ့ ဆုဖလား အောင်မြင်မှုမရသေးပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပြိုင်ပွဲစုံ(၄၁)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ။ အခု ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာလည်း (၅)ဂိုးအထိ သွင်းထားပြီး ရွှေဖိနပ်ဆုရဖို့ အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ ဟာရီကိန်းအတွက် အင်္ဂလန်နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင် Michael Owen (၂၀၀၁)နောက်ပိုင်း Ballon d’Or ဆုကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်မယ့် အင်္ဂလန်ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းရေးထိုးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အပယ်ခံဘ၀ကနေ ကမ္ဘာ့အဆင့်တန်းဝင်ကစားသမားအဖြစ် တက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုက လေးစားစရာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မန်စီးတီးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့နေရာမှာ အဓိက၀င်ရိုးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းနားဟာ အခု ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းရဲ့ အသက်သွေးကြောအဖြစ် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ballon d’Or ဆုကို ဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမားထဲက တစ်ဦးမှ မရဖူးသေးတဲ့ ကျိန်စာဆိုးက ဒီဘရိုင်းနားက ချိုးဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။
နေမာ၊ ဘာပေ၊ ဟာရီကိန်း၊ ဒီဘရိုင်းနားတို့လို ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြခွင့် မရှိတော့ပေမယ့်လည်း ဆာလာဟာ အုပ်စုတွင်းနှစ်ပွဲမှာ (၂)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့အတူ ရွှေရောင်ကာလတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဆာလာဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ(၅၂)ပွဲမှာ (၄၄)ဂိုးသွင်းပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ဒုတိယမြောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရွှေဖိနပ်ဆု၊ တစ်ဦးချင်းအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုတွေကို ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ လာမယ့်ရာသီသစ်မှာလည်း သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးစွမ်းရည်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆာလာဟာ Ballon d’Or ဆုကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားသမားစာရင်းမှာ သေချာပေါက် ပါဝင်နိုင်မှာပါ။
Akhayar Sports ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း ဒီနှစ် Ballon d’Or ဆုကို ဘယ်သူရမလဲဆိုတာ ကိုယ့်အမြင်လေးတွေ ပြောခဲ့ကြပါလား . . .
Photo:Getty Images,The Times,The Japan Times,FIFA
ဒီနှဈ Ballon d’Or ဆုအတှကျ ပိုငျရှငျသဈ ထှကျပျေါလာမလား
ပွီးခဲ့တဲ့ (၁၀)စုနှဈတဈခုအတှငျး စီရျောနယျလျဒို C Ronaldo ၊ မကျဆီ Messi တို့သာ လှမျးမိုးထားတဲ့ Ballon d’Or ဆုက ဒီနှဈမှာ သူတို့နှဈဦးမဟုတျဘဲ ပိုငျရှငျသဈထှကျပျေါလာမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနတေယျ။ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈအတှငျး Ballon d’Or ဆုကို သူတဈပွနျ ကိုယျတဈပွနျရယူခဲ့ပွီး တဈဦးကို (၅)ကွိမျစီ ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနှဈကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ သူတို့ရဲ့ နိုငျငံအသငျးတှဖွေဈကွတဲ့ အာဂငျြတီးနား၊ ပျေါတူဂီတို့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကပဲ စောစောစီးစီး ထှကျခဲ့ရတာကွောငျ့ ၂၀၁၈ Ballon d’Or ပိုငျရှငျအပွောငျးအလဲဖွဈမလာဆိုပွီး ပရိသတျတှကေ စောငျ့ကွနကွေတာပါ။ ဒီနှဈအတှကျ Ballon d’Or ဆုကို မကျဆီနဲ့စီရျောနယျလျဒိုမဟုတျဘဲ ဘယျကစားသမားက ဆှတျခူးနိုငျမလဲ၊ ဆုရဖို့ အလားအလာအကောငျးဆုံး ကစားသမားတှကေ ဘယျသူတှဖွေဈမလဲဆိုတာ Akhayar Sports ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . . .
Ballon d’Or ဆုရဖို့ အလားအလာကောငျးတဲ့ ကစားသမားစာရငျးမှာ နမော ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနတောက သိပျတော့မထူးဆနျးပါဘူး။ မကျဆီ၊ စီရျောနယျလျဒို ခတျေလှနျမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဖွဈလာဖို့ ‘တဈ’ပေးခံထားရတဲ့ နမောအတှကျလညျး ဂုဏျသိက်ခာမွငျ့မားတဲ့ ဒီလိုဆုမြိုးပိုငျဆိုငျဖို့ ထိုကျတနျတယျလို့ပဲ ဆိုရမယျ။ လကျရှိကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာလညျး ဘရာဇီးလျအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွနပွေီး (၂)ဂိုးသှငျးယူထားသလို ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ရောကျအောငျ ပို့ဆောငျထားတယျ။ အခုနှရောသီမှာ ရီးယဲလျအသငျးကို ရောကျဖို့ သတငျးတှထှေကျနတေဲ့ နမောအနနေဲ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျဖို့ ပထမခွလှေမျးအဖွဈ Ballon d’Or ဆု ဆှတျခူးနိုငျဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။
အသကျ(၁၉)နှဈသာရှိသေးပမေယျ့လညျး World Class ခွစှေမျးမြိုးပွသနတေဲ့ ဘာပကေလညျး Ballon d’Or ဆုကို ဆှတျခူးဖို့ ထိုကျတနျတဲ့အရညျအသှေးရှိသူပါ။ ပီရူးကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား အုပျစုပှဲမှာ အနိုငျဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးသူ၊ အာဂငျြတီးနားနဲ့ပှဲတုနျးက (၂)ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့အတှကျ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ပီလီ Pele (၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလား)နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားတဈပှဲတညျး(၂)ဂိုးသှငျးခဲ့သူ စတဲ့စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတယျ။ တကယျလို့ အခုကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပုံစံကောငျးတှေ ဆကျပွနမေယျဆိုရငျ Ballon d’Or ဆုကို အသကျအငယျဆုံးဆှတျခူးနိုငျတဲ့သူဖွဈလာမှာပါ။
ဟာရီကိနျး Harry Kane
Goal Machine ဟာရီကိနျးရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေ ရပျတနျ့လို့ မရနိုငျလောကျအောငျပဲ။ စပါးအသငျးနဲ့ ဆုဖလား အောငျမွငျမှုမရသေးပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပွိုငျပှဲစုံ(၄၁)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တဲ့ စှမျးဆောငျရညျက သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး မှတျတမျးတဈခုပါ။ အခု ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာလညျး (၅)ဂိုးအထိ သှငျးထားပွီး ရှဖေိနပျဆုရဖို့ အခွအေနကေောငျးနတေဲ့ ဟာရီကိနျးအတှကျ အင်ျဂလနျနာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးဟောငျး မိုကျကယျအိုဝငျ Michael Owen (၂၀၀၁)နောကျပိုငျး Ballon d’Or ဆုကို ပထမဆုံးအကွိမျဆှတျခူးနိုငျမယျ့ အင်ျဂလနျကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးရေးထိုးဖို့ အသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။
ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ အပယျခံဘဝကနေ ကမ်ဘာ့အဆငျ့တနျးဝငျကစားသမားအဖွဈ တကျလှမျးခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုငျးနားရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုက လေးစားစရာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက မနျစီးတီးအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုဆှတျခူးခဲ့တဲ့နရောမှာ အဓိကဝငျရိုးအဖွဈ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုငျးနားဟာ အခု ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာလညျး ဘယျလျဂြီယံအသငျးရဲ့ အသကျသှေးကွောအဖွဈ ခွစှေမျးပွနတေဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ Ballon d’Or ဆုကို ဘယျလျဂြီယံကစားသမားထဲက တဈဦးမှ မရဖူးသေးတဲ့ ကြိနျစာဆိုးက ဒီဘရိုငျးနားက ခြိုးဖွတျနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။
နမော၊ ဘာပေ၊ ဟာရီကိနျး၊ ဒီဘရိုငျးနားတို့လို ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ခွစှေမျးပွခှငျ့ မရှိတော့ပမေယျ့လညျး ဆာလာဟာ အုပျစုတှငျးနှဈပှဲမှာ (၂)ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့အဆငျ့အတနျးကို ပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့အတူ ရှရေောငျကာလတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ဆာလာဟာ ပွိုငျပှဲစုံ(၅၂)ပှဲမှာ (၄၄)ဂိုးသှငျးပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ဒုတိယမွောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျခဲ့တဲ့အပွငျ ပရီးမီးယားလိဂျရှဖေိနပျဆု၊ တဈဦးခငျြးအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုတှကေို ဆှတျခူးခဲ့တယျ။ တကယျလို့ လာမယျ့ရာသီသဈမှာလညျး သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးစှမျးရညျကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးနိုငျမယျဆိုရငျ ဆာလာဟာ Ballon d’Or ဆုကို စိနျချေါနိုငျစှမျးရှိတဲ့ကစားသမားစာရငျးမှာ သခြောပေါကျ ပါဝငျနိုငျမှာပါ။
Akhayar Sports ပရိသတျတှအေနနေဲ့လညျး ဒီနှဈ Ballon d’Or ဆုကို ဘယျသူရမလဲဆိုတာ ကိုယျ့အမွငျလေးတှေ ပွောခဲ့ကွပါလား . . .